Hairdresser ọzụzụ Hairdressing - Hairdresser - Gaa! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ (Nkebi oge // DBSO // CAMPUS BACKGROUND)
Mee ka ụwa bụrụ nicer
Anyị na-enye ọzụzụ ọzụzụ ọnụ
onye na-edozi isi na ntutu isi
Onye na-edozi ákwà na onye na-edozi isi
Dị ka onye na-akpụ isi, i nwere ike inye ma ndị nwoke ma ndị nwanyị ezigbo ntụ. A na-akwagide na nlekọta ntutu isi, na ịsa na agba. Ị na-amụtakwa otú e si akpụzi edozi isi nwa oge. Ị na-amụtakwa otú e si elekọta wigs na ọzụzụ. Anyị na-akụzikwara gị ihe ndị bụ isi na-elekọta ịma mma.
Onye isi nlekota onwe onye
Ọ bụrụ na ị rụzuru nke ọma ịkụziri onye nlekota ntutu isi, ị nwere ike ịkachamara dịka onye njikwa onwe ya nke ụlọ ọrụ ntutu isi. Ọzụzụ a na-adọrọ mmasị karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite azụmahịa gị.
Ị na-achọ ịrụ ọrụ maka ndị ahịa
Ị na-achọ ịma mma
Nlekọta onye na-edozi isi na-adịru afọ abụọ ma ọ bụ atọ dabere na ahụmahụ gị, nkà gị na ihe ọmụma gị.
Onye na-edozi ya bụ ọrụ ọkpụkpụ.
Ndị na-edozi mmanya na-ewu ewu na-ewu ewu.
Onye na-edozi onye na-edozi isi
Gaa ebe a na tebụl nkuzi nke ọzụzụ oge. Kapper:
Isi ngalaba X
03 / 328 xx xx